Gebze Darıca Metro waxaa la damacsan yahay in la furo Sebtember 2023 | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara41 KocaeliGebze Darıca Metro waxaa la damacsan yahay in la furo Sebtember 2023
Gebze Darıca Metro waxaa la damacsan yahay in la furo Sebtember 2023
22 / 05 / 2020 41 Kocaeli, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Gobolka Marmara, Metro, TURKEY
Gebze ayaa sidoo kale looga danleeyahay in la furo tareenka dhulka hoostiisa ah bisha Sebtember
Midowga Dawladaha Hoose ee Marmara iyo Kocaeli Metropolitan Municipal Assoc. Dr. Tahir Büyükakın wuxuu baaray howlaha dhismaha Jidka mitirka Gebze-Darıca, oo loo wareejiyay Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha, 52 mitir oo dhulka ka hooseeya. Shaqooyinka tunnel-ka ee mashruuca tareenka dhulka hoostiisa ah oo ay aasaastay Kocaeli Magaalo-weynaha oo markii dambena lagu wareejiyay Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha iyada oo ay socdaan dadaallada Duqa Magaalada Büyükakın, ayaa lagu sii wadaa qaab xaddidan. Duqa magaalada Büyükakın, oo cadeeyay 52 mitir dhulka hoostiisa isaga oo aaday dhanka hoose ee tunelada ee ka shaqeyn doona Saldhigga Dhexe ee Gebze, ayaa yiri, “Waxaa jira shaqo aad u wanaagsan halkan. Waxaa jira koox sii wadata shaqeynta maalin iyo habeenba. Dhismooyinka ka dhex dhici doona tunnel-ka xaruntaan ayaa la soo gabagabeyn doonaa dhamaadka bisha June. ”
Waxaan fursad u helnay inaan si dhaqso leh horumar ugu sameyno ”
Duqa Magaalada Gebze Zinnur Büyükgöz, Gudoomiyaha Xisbiga AK Party İrfan Ayar, Kuxigeenka Xoghayaha Dawlada Hoose Mustafa Altay iyo kooxda farsamada ee shirkada qandaraaslaha, oo iyagu gacanta ku hayey dhismaha mashruucan, ayaa sidoo kale goob joog ka ahaa imtixaanka. Wuxuu yidhi "Dhismaha tunelada way sii soconayaan, shirkadayada qandaraasleydu si dhakhso leh ayey u shaqaysaa. Waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo cid kasta oo gacan ka geysatay. Waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo madaxweynahayaga Recep Tayyip Erdoğan. Taageeradooda, waxaan awoodnay inaan si dhakhso leh u socodno mashruucan. Iyada oo ay Wasaaradda Gaadiidka xireyso mashruuca, waxaan fursad u helnay inaan si dhakhso badan horumar ku sameyno. Sidan, waxaan ku dhammeyn karnaa mashruucayaga mitirka muddadaas gudahiisa. ”
“WAA MAHAD LEH QARAXII QURUX BADAN AYAAN ISKUGU JIRAY”
Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Kocaeli Metropolitan Munsoc Assoc oo isaguna soo gudbiyey macluumaadka ah in Khadka Tareenka ee OSB-Gebze-Darıca dhererkiisu noqon doono 15.4 KM dhererkiisuna uu ka koobnaan doono 11 saldhig. Dr Tahir Büyükakın wuxuu yidhi, hadda waxay hoos ugu dhacday 52 mitir. Dhismooyin iyo dhismeyaal saldhig ayaa la dhisayaa. Halkan waxaa ku yaal sawir aad u qurux badan oo aan ku faanno oo ku faraxsanahay. Qodista waxay wali kusii socotaa sedex saldhig oo dheeri ah oo leh shaqo aad u dhakhso badan. Haddii Alle idmo, mashruucan ayaa lagu dhammayn doonaa waqtiga loo qorsheeyay. Waxaan mar labaad u mahadcelineynaa Madaxweynaheena. Annaga oo adeegsanayna Wasaaradda Gaadiidka, oggolaanshaha Allah, waxaan u furi doonnay mashruucayaga mitirka adeeg loogu talagalay muwaadiniinta ku nool gobolka muddadan ”.
"Waxaan qorsheyneynaa ujeeddada mashruuca METRO ee Sebtember 2023"
Madaxweyne Büyükakın wuxuu yiri "Mashruucan waxaa loo arkaa inuu yahay mid ka kooban isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha ee udhaxeeya Darica Gebze iyo aagga Wershadaha abaabulan, laakiin muhiimad ahaan waa shaqo kaabayaal balaaran oo isku xiraya labada magaalo" ayuu yiri Büy arekakın. Waxaan ku xirannahay dhamaan kaabayaasha nidaamka tareenka ee Istanbul. ” Isagoo sheegay in shirkada qandaraaslaha ay sifiican u shaqeyneyso, Duqa Magaalada Büyükakın wuxuu yiri, Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo dhammaan asxaabteena ka shaqeysta habeen iyo maalinba bartaan iyo Agaasimeyaasha Guud ee Maalgashiga ee Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha. Waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo dadkayaga ku nool Gebze dulqaadkooda iyo fahamkooda. Waxaan rajeyneynaa, haddii aysan jirin wax dib-u-dhac ah, waxaan qorsheyneynaa inaan dhammeysanno mashruucayaga mitirka bisha Sebtember 2023 sida ku xusan jadwalka shaqada ee qorsheysan. Sababta loo yaqaan 'coronavirus', dabcan, iyadoo la daryeelayo masaafada bulshada, iyadoo la qaadayo tallaabooyinka lagama maarmaanka ah ee la xiriira caafimaadka iyo amniga shaqada, ayay shaqadu sii wadaysaa.
“WAA KU SAABSAN WIILAHA WASAARADA MUWAADINIINTA EE KU SAABSAN MAWDAN MAGACAAN”
Duqa Büyükakın ayaa mar kale carrabka ku adkeeyay “Waxaan rajeyneyaa in tan loo adeegsan doono Gebze-da bisha Sebtember ee 2023”. Waxay keeni lahaayeen Sabiha Gökçen tareenka dhulka hoostiisa. Waxaan sidoo kale ka abuuri karnaa khadka Sabiha Gökçen halkan. Wasaaradda Gaadiidkayadu waxay sii wadaysaa wadaxaajoodkeeda ku saabsan arrintan. Sababtoo ah waa shaqo kale oo khadka toosan ah. Waxaan sidoo kale daraasad u sameynay khadka tareenka isku xiraya garoonka diyaaradaha Cengiz Topel iyo Degmooyinkayaga Dagince, Izmit iyo Kartepe ee u dhexeeya degmadayada Gacanka. ”
Digada ugu horeysa ee Gebze Metro Line ayaa lagu beegsanayaa 2018
Biriijka Çanakkale waxaa loo adeegsan doonaa 2023, wuxuu noqon doonaa mitirka 2023
Tallaabada koowaad ee tareenka Gebze-Dariga waa xNUMX
Gebze-Darica Metro waxaa lagu soo bandhigay Mashruuca ugu weyn ee taariikhda Kocaeli
Gebze Darıca Isku-dubarid Waxqabadka Adeegga Maaraynta iyo Adeegga Tixgelinta
Ogeysiiska Qaadashada: Adeegyada La-talinta Isku-xirka ee Maareynta Kormeerka Gebze Darıca Subway
Gebze-Darica Metro, si ay u gaaraan bartamaha Kocaeli!
Izmir Metro, oo maalin walba dhoofiya 500 rakaab ah, waa 20 jir
Nidaamka Raadinta Iftiinka Gebze Darıca iyo Izmitram Tram Extension Khadadka Mashruuca Xulista…
Degmada Gebze-Darica-Çayıova diyaarinta nidaamka fudud ee tareenka
Ogeysiinta Ugaarsiga: Adeegga latashiga mashruuca waxaa la bixin doonaa (Gebze-Darıca Hafif…
Mashruuca ugu dambeeya ee Gebze Darbca Light Rail Line ee loogu talagalay hirgelinta kesin